Haa, waxaan bixin karnaa dukumeentiyada intooda badan oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Falanqaynta/U hoggaansanaanta; Caymis; Asalka, iyo dukumentiyada kale ee dhoofinta marka loo baahdo.
Shaybaarada, wakhtiga rasaastu waa ilaa 7 maalmood. Wax soo saarka tirada badan, wakhtiga hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaanka ayaa wax ku ool noqda marka (1) aanu helnay deebaajigaagii, iyo (2) waxaanu haysanaa ogolaanshahaagii ugu dambeeyay ee alaabtaada. Haddii wakhtiyada hogaanka aanu ku shaqaynayn wakhtigaaga kama dambaysta ah, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Dhammaan kiisaska waxaan isku dayi doonaa inaan daboolno baahiyahaaga. Inta badan kiisaska waan awoodnaa inaan sidaas sameyno.
Waxaan dammaanad qaadeynaa agabkayaga iyo shaqadayada. Ballanqaadkayaga ayaa ah inaad ku qanacdo alaabtayada. Dammaanad ahaan iyo haddii kale, waa dhaqanka shirkadeena in wax laga qabto oo loo xalliyo dhammaan arrimaha macaamiisha si qof kastaa ku qanacsan yahay.